Fitsangatsanganana nivadika fahafatesana ! Tovolahy roa, 19 sy 24 taona ary samy mbola mpianatra, no indray namoy ny ainy teny amin’ny reniranon’Ampasimbe amin’iny kaominina Ambohimangakely iny, ny sabotsy lasa teo. Niaraka tamina andiana mpianatra, tovolahy sy tovovavy, miisa sivy izy roa lahy ireo.
Raha araka ny fitantaran’ireo nanatri-maso ny fitrangan’ny loza, dia nijanona mba hilomano teo amin’ilay renirano izy roa lahy satria nafana be loatra ny andro. Teo amin’ny faritra fantatry ny maro antsoina hoe « Andranomandry » no nisehoan’izany.
Tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany antoandro no nitranga ny loza. Rehefa samy nanala fitafiana dia ny tovolahy iray no nitsoraka voalohany tany anaty rano. Niantso vonjy anefa izy io satria toy ny nisy nisintona tany ambany rano tany. « Ilay tovolahy iray irery avy eo no sahy niditra tany anaty rano saika hamonjy azy. Niara-nilentika tany anefa izy roa lahy ary tsy nipoitra intsony », hoy ny renim-pianakaviana iray nitantara ny zava-niseho. Iray tamin’ireo olona monina eny amin’ny manodidina no nisitrika naka ny vatana mangatsiakan’izy roa lahy tany ambany rano tany.
« Misy lolo »
Raha ny nambaran’ireo olona nitangorona , taorian’ny fisehoan’ny loza, dia efa nisy mpanasa lamba nandrara ireto tanora ireto, mba tsy hilomano amin’io faritry ny renirano io. Malaza ho misy lolo, hono, mantsy ilay rano, ary tsy tia vahiny. « Matetika no maka olona io rano io », hoy ihany ny sasany tamin’ireo mponina eny an-toerana.
Rehefa tafakatra an-tanety ireo razana dia tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana avy eny amin’ny borigadin’ny Zandarimariam-pirenena eny Ambohimalaza, nanao fizahana ny raharaha. Nanakanana fiara avy hatrany kosa nitondra ny vatana mangatsiakan’izy roa lahy, izay nivantana tany amin’ny trano fonenany avy hatrany, raha ny fitantaran’ireo olona teny an-toerana ihany. Fantatra fa samy mbola mpianatra amin’ny sekoly tsy miankina iray eto an-drenivohitra avokoa izy sivy mianadahy nitsangatsangana ireto.